Somaliland oo jawaab ka bixisay eedaymo Somalia u soo jeedisay
Home WARARKA Somaliland oo jawaab ka bixisay eedaymo Somalia u soo jeedisay
Hargeysa (Berberanews) Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa jawaab adag ka bixisay hadal ka soo yeedhay Ra’iisul-wasaaraha dawladda aan iskeed isku maamuli Karin ee Soomaaliya oo ay ka soo yeedheen hadallo farogelin ku ah Somaliland.
War-murtiyeed ay maanta soo saartay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland, ayaa lagu sheegtay in Ra’iisul-wasaaraha Soomaaliya ay ka soo yeedheen eedaymo aan sal iyo raad lahayn oo ka dhalatay tallaabadii ka fursan waaga ahayd ee Xukuumadda Somaliland ay dalkoodii dib ugu celisay dad u dhashay Soomaaliya oo sifo sharci darro ah u deganaa degmada Laascaanood ee xarunta Gobolka Sool.
“Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya wuxuu doortay inuu gudbiyey akhbaaraad aan sal iyo raad laheyn iyo eedeymo ku saabsan arrimo la xidhiidha go’aanka sharciga iyo lagama maarmaamaanka ah ee dowladda Somaliland ay ku masaafurineyso shakhsiyaad gaar ah, oo si aan sharci aheyn ku deganaa degmada Laascaanood,” ayaa lagu yidhi qoraal kasoo baxay Wasaarada Arrimaha Dibedda Somaliland.
Somaliland waxay sheegtay inay muddo ku dhow 30 sano hoy nabdoon u aheyd dad kasoo jeeda Soomaaliya, sida ay u dhigtay.
“Waa muhiim inaan adkeyno in go’aanka dhulka Somaliland looga masaafurinayo shakhsiyaadka la doortay uu ka dhashay arrimo quseeya amniga, oo ay ka mid yihiin codsi ka yimid bulshada iyo mas’uuliyiinta degmada Laascaanood,” ayaa lagu yidhi qoraalka.
“Warbixino sirdoon iyo la-tashiyo ayaa bixiyey tilmaamo cad oo ah in shakhsiyaadkan ay halis gelinayeen ammaanka bulshada deegaanka. Sidaas darteed, dowladda Somaliland waxaa qasab ku noqotay inay tallaabo qaado, balse hab si buuxda u ixtiraamaya xuquuqda aadahana dhinacyada, oo ay ku jirto cunno, biyo iyo gabbaad ku-meel gaar ah, iyo ayada oo aan waxyeello hanti iyo mid shakhsi la gaadhsiin.”
“Daan-daansiga noocan ah looma qaadan doono si fudud, wuxuuna caddeymo dheeraad u yahay in dowladda Muqdisho aan loo arkin saaxiib caalami ah oo la aamini karo, marka ay noqoto nabadda, ammaanka iyo xasilloonida gobolka Geeska Afrika,” ayaa lagu yirdhi qoraalka.
Previous articleHoos u dhac weyn oo ku yimi saamigii shirkadda Facebook ee suuqa
Next articleSomaliland: Ex-Wasiir Yuusuf Raage oo ku baaqay in Sharciga la horkeeno Afar Kooxood oo Khiyaamo Qaran ku kacay